Izeluleko zokubhalwa kwencwadi yokufa... | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Ikhaya Explore Izeluleko zokubhalwa kwencwadi yokufaka isicelo somsebenzi
Izeluleko zokubhalwa kwencwadi yokufaka isicelo somsebenzi
Khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ongaba umqashi wakho uqala ahlangane nencwadi yakho yokufaka isicelo somsebenzi, bese ayihlolisise ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuhlangana nawe. Ngakho-ke ukuzethula ngendlela efanele encwadini yakho yokufaka isicelo somsebenzi yisinyathelo sokuqala endleleni ebheke ekutholeni umsebenzi. Qinisekisa ukuthi umenza afise ukuhlangana nawe kuqala nje. Yakha incwadi yokufaka isicelo efundeka kalula. Khumbula ukuthi ofunda incwadi yakho yokufaka isicelo uzofunda ezinye izincwadi eziningi, hhayi eyakho kuphela. Qaphela izeluleko ezilandelayo uma ubhala incwadi yakho yokufaka isicelo somsebenzi:
Ukwethembeka kubalulekile kakhulu
Ungalingeki uziphakamise kakhulu encwadini yakho yokufaka isicelo somsebenzi. Ungagcina usubukeka njengomuntu ophambene emqondweni kwinhlolokhono yakho. Cacisa kabanzi ngomsebenzi wakho obuwenza ngenkathi edlule. Uma uke wasebenza njengomsizi, ungesabi ukukusho lokho. Kodwa ungasho ukuthi usungakwazi ukusebenza njengomphathi ngoba usuwatholile amakhono adingekayo. Uma ungenaso isipiliyoni somsebenzi, kufanele ukucacise ukuthi ufisa ukuba yingxenye yabasebenzi, uzimisele futhi unesifiso sokufunda umsebenzi nokubamba nomthelela omkhulu empumelelweni yalowo msebenzi. Uma kukhona othanda ukukwenza noma into oyithandayo umdlalo exhumene nomsebenzi owufakela isicelo ungakufaka nakho encwadini yakho. Noma uma ucabanga ukuthi lokho othanda ukukwenza noma into oyithandayo umdlalo othile kukwenza ubukeke kangcono, ungalufaka lolo lwazi. Akufanele ukuthi uqambe amanga ukuze ubukwe njengomuntu ongcono.
Ukuhlelwa kwencwadi yokufaka isicelo somsebenzi
Umlando ngomsebenzi osuke wawenza -Qala ngomsebenzi ogcine ngawo ukuwenza
Iziqu zemfundo ephakeme
Ubulungu ezinhlanganweni zemisebenzi efundelwe
Ukukhetha uhlobo lwencwadi yokufaka isicelo somsebenzi olufanele
Kukhona izinhlobo ezintathu zezincwadi zokufaka isicelo somsebenzi. Khetha ehambelana nawe kuzona.
Incwadi yokufaka isicelo ehlelwe ngokulandelana kwezenzeko (Chronological CV)
Le ndlela iyona ethandwa kakhulu ngoba ofundayo uyakwazi ukubona ngokushesha futhi kalula ukuthi ubusebenza kuphi. Kepha, uma uke waba nesikhathi eside ungasebenzi, lokho nakho kuvela kalula kule ncwadi. Cabanga ngokuthi uyafuna yini ukugqamisa lolo lwazi.
Incwadi yokufaka isicelo eveza umsebenzi namakhono (Functional CV)
Le ndlela isiza kakhulu uma unesipiliyoni esiningi ngomsebenzi noma uma unamakhono athile ofuna ukuwaveza. Ngakho nikezela ngolwazi olumayelana nalapho wawusebenza khona nokuthi wawenzani. Noma uma unamakhono, isibonelo - ulwazi lokusebenzisa imishini, kufanele-ke uveze imishini owake wayisebenzisa futhi uchaze kafishane ikhono lakho. Lolu hlobo lwencwadi yokufaka isicelo somsebenzi isetshenziswa emisebenzini ekhethekile, ngakho-ke cabangisisa kahle ngaphambi kokuyisebenzisa.
Incwadi yokufaka isicelo ehlanganisayo (Combined CV)
Le ndlela yokuhlela incwadi nayo futhi isetshenziswa kakhulu abantu abanesipiliyoni esiningi somsebenzi asebewenze isikhathi eside. Isetshenziswa kakhulu ukufaka izicelo zemisebenzi yezikhundla eziphezulu.
Isinqumo ngobude bencwadi yakho yokufaka isicelo somsebenzi sincike kwisikhangiso somsebenzi. Ubude bencwadi yokufaka isicelo somsebenzi akufanele budlule amakhasi amathathu. Imisebenzi yezikhulu yona ingadinga izincwadi ezinde.
Qinisekisa ukuthi ubhala ngokugqamile izihlokwana zakho ezahlukweni ezahlukene zencwadi yakho.
Sebenzisa amabhulethi. Ungabhali izigaba. Khumbula ukuthi ofunda incwadi yakho ufuna ukubona ulwazi kalula.
Sebenzisa isilinganiso sefonti esijwayelekile. Ungasebenzisi ifonti ehlotshisiwe ezonenga amehlo ofundayo. Ungafaki imibala eminingi encwadini yakho.
Uma ubhala incwadi yakho ngesiZulu, bhala ngesiZulu esiseqophelweni. Ungasebenzisi ulimi olungajwayelekanga futhi ungaxubi nesiNgisi. Akuvumelekile ukuthi usebenzise amagama amadala esiZulu. Imigomo iyefana noma ubhala incwadi yakho ngesiNgisi.
Qinisekisa ukuthi akukho maphutha okubhala, awesipelingi noma amaphutha okusetshenziswa kolimi. Khumbula ukuthi indlela ozethula ngayo okokuqala ibalulekile kakhulu. Uma kunamaphutha, umqashi wakho uzocabanga ukuthi awunaki. Noma kulabo abangakhulumi ulimi njengolimi lwebele, amaphutha okunganaki enza kucatshangwe ukuthi awusazi isiNgisi.